kuyedza pasina qa sosi
Kuru Agile Kuedza Pasina QA Resource
Zvinokwanisika here kuita kuyedza kwakaringana kwesoftware application pamwe chete nevagadziri uye maBA uye pasina QA sosi?
Kune zvikoro zviviri zvemifungo pano:
Imwe ndeyekutenda kuti zvese zvipukanana zvine chekuita nekodhi uye kuti kana iwe uine yakakwira kwazvo muzana yekuyedzwa kufukidza kodhi yako, saka zvakanyanya haufanire kunge usina mabugs. Sevanoedza, tese tinoziva kuti ichi hachisi chokwadi!
Icho chimwe chitendero ndechekuti iwe unoita kuyedza kukwana kwechikwata uyezve kuita kusangana, system uye mushandisi kugamuchirwa kuyedzwa kuona kuti kunyorera kwakaringana nechinangwa. Nepo ichi chichiita sechakanaka zano, hazviite sezvo vagadziri vachida kukodha zvinhu zvitsva!
Dzose idzi dzidziso dzakanyanyisa.
Kuedza kodhi yako pachako kunogona kushanda, nekuti semusimudziri iwe unoziva kuti chikamu chipi chekodhi yako chakaomarara uye chingangoita ngoro, saka unozotarisa kunzvimbo iyoyo. Zvakare, uchiziva kuti hakuchina QA, iwe unomanikidzwa kunyora mhando kodhi, sekugadzwa kwayakaitwa nemumwe mugadziri
Mune rangu rekutanga basa, ini ndakanga ndisina QA. Zvaive kwandiri kuti ndione kuti yangu kodhi yaive yemhando yakakwana ndisati ndayiiburitsa, uye chinhu ichocho chakandityisa zvakakwana zvekuti ndakadzidza kunyora kodhi yemhando (izvo zvinoreva kuti urikuyedza kodhi yako pachako, uchiita yako wega QA).
Kuongorora Kwekuvandudza Kwakakwana Here?
Ini ndinotenda idanho rakanaka kukurudzira vanogadzira software kuti vatore hunhu hwekodhi yavo, zvisinei kana iwe ukaedza yako wega kodhi, iwe uri mukana wekupotsa makirasi ese ebugs.
Iwe unogona kuve unoshanda kwazvo pakubata mhando dzembugs dzaunogona kufunga nezvadzo, asi idzo dzinogara dziri dzakareruka tsikidzi kubata pakutanga. Iyo bvunzo yaunonyora iwe pachako haizomboite basa rakanaka rekubata zvikanganiso mukufungidzira kwako nezve izvo iyo kodhi inofanirwa kuita, ndeapi marudzi ekupinza ayo aanoda kubata, nezvimwewo.Kubata iwo marudzi eaya epfungwa dzebugs dzinonyatsoda kuyedzwa kunopikisa kubva kune mumwe munhu isn t kutanga kubva kune imwechete seti yekufungidzira.
Kushanda semuchina wekuyedza kwaireva kuti ndaifanira kutarisa pakuyedza nekunyora zvese panguva imwe chete, uye ndaigara ndichinetseka! Pandakanga ndichinyora bvunzo, ini ndaingoda kuve nechokwadi chekuti kodhi inoitisa uye kuti bvunzo ripfuure, ini handina kunetseka zvakanyanya nezve iyo chaiyo bvunzo nekuti yangu yakanyanya kutarisa yaive yekukodha. Pasina nguva ndakaona kuti ndanga ndichigadzira bvunzo dzisina basa idzo dzaisapa kukosha.
Imwe pfungwa yakakosha yekucherechedza ndeyekuti kuyedza kweyuniti kunongobata zvikanganiso zvemugadziri mukodhi, kuyedzwa kweyuniti hakuwone kukundikana muchikumbiro, zvinoreva kuti kana uine 100% kodhi yekuvhara, izvo hazvireve kuti isina bhagidhi application.
Kunyange zvichingove zvakafanira kuyedza yako wega kodhi kuburikidza neyuniti bvunzo isati yapfuudzwa, zvakare zvakakosha kuti uve neyechipiri seti yemeso pairi kubva kune hunhu maonero. Kazhinji isu tiri padyo padyo nekodhi kuti tinyatso kuirova zvakanaka uye tinozviisa pasi peasina kusimba makesi kesi, uye vakanaka QA vanhu vane hunyanzvi pakuita izvozvo. Kuedzwa padanho rehurongwa neimwe seti yevashandisi senge ma testers anogona kazhinji kuratidza anonakidza mabugs.
Zvakare, hazvisi zvese nezve kuyedza kushanda. Isu tinofanirwa kuve nehanya uye kunetseka nezvekuyedzwa kwekuita, kuyedzwa kwekuchengetedza, kuyedzwa kwekushandisa, nezvimwe, izvo zvinodiwa kana tichida kuburitsa software yemhando yepamusoro.
Nei Tichiri Kuda QA?
Vanoedza dzimwe nguva vanoonekwa sevharanda kune iro rese rekupa pombi. Hazvingave zviri nani zvakanyanya kana zvese zvikagadzirwa pasina kupindira kwebhuku uye pasina vaedzo vanomutsa zviputi kumisa kuburitswa?
Chikamu chechinetso kana vaedzo vachionekwa sevadzvinyiriri iri nekuda kwekushayikwa kwemuridzi wehunhu pakati pevanogadzira. Kana munhu wese achinyatsonzwa kuti vaive nebasa rehunhu hwechigadzirwa (kwete kodhi chete) ipapo vagadziri nevanoedza vanoshanda vakanangana nechinangwa chimwe chete.
MaTesters anogona kusangana nevavandudzi kuti vanyore zvirinani bvunzo uye vagadziri vanogona kubatsira testers nekunyora otomatiki macheki uye zvakare kudzidzisa vanoedza nezve dhizaini yekushandisa kuitira kuti vagone kugadzira bvunzo dzakanaka kuti vawane nzvimbo dzinogona kutyora panguva yekuyedzwa kwesystem.
Munyika yakanaka, testers havafanirwe kuwana chero hurema, kana hurema hushoma. Kana paine 'timu yeQA' ine basa rekutsvaga hurema, zviri kuyedza kune vanogadzira kuti vangovimba nevanoyedza kuti vawane zvese zvinokanganisa ivo vanogadzira vachitarisa mukuvandudza uye kukodha.
Nepo danho reYahoo rekubvisa iro QA uye Testing department rinokurudzira vagadziri kutora humhizha hwechigadzirwa, hachisati chakaringana kuverengera chakasimba chigadzirwa. Kana wataura izvo, kunyangwe uine timu yevaedzo iwe haugone kuvimbisa isina-bug software, asi chakakosha kuve nechokwadi chekuti software inotariswa kubva kwakasiyana maonero uye kubva kwakasiyana maonero uye ndiko kune chaiko kubatsirwa kwekuve yakanaka QA basa (zvinopesana neQA timu) inouya.
Vanoedza vanogona kuve nechokwadi chekuti vanogadzira vanoteedzera akanakisa maitiro ekuvimbisa uye nekubatsira nehunyanzvi uye bhizinesi bvunzo dhizaini yekubatsira kuona iyo inonyanya kukosha bugs isati yaburitsa software.
Kana iwe uchimhanyisa, iwe unogona kuwana yechipiri-gen Amazon Echo Dot pamhondi $ 20 mutengo
5 pikicha bhuku anodhinda masevhisi ekushandura ako mapikicha efoni kuva ndangariro
Usatenge yakavhurwa OnePlus 8 uye Pro kuti ishandise paVerizon 5G
Yakanakisa AT & T inobata izvozvi
Steve Jobs aive nazvo chaizvo. Adobe inogumisa kutsigira Flash
5 yeakanakisa eApple maapps ekumhanya kamera uye yenjodzi yemumigwagwa yambiro